Jadwalka xilliyada ee walxaha | La cusbooneysiiyay Qaamuuska Kimistariga 2022
Nooc fudud oo leh lambar Actomic iyo Miisaan
Kooxda → ↓ Muddo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
* Kooxda Lantan
** Kooxda Actini
Birta Alkali Alkaline dhulka birta ah Lanthanide Actinide Birta ku meel gaarka ah
Birta kala-guurka kadib Metalloid Wax aan caadi ahayn Waxqabadka aan caadiga ahayn Gaaska Noble
Waxyaabaha kiimikada aan la aqoon
Laga soo bilaabo Burburkii
Xuduud No: Lama helin
Xaaladaha caadiga ah ee heerkulka iyo cadaadiska
Xaaladaha caadiga ah ee heerkulka iyo cadaadiska ayaa ah noocyo caadi ah oo loogu talagalay cabbiraadaha tijaabada ee la dejinayo si loogu oggolaado isbarbardhigga lagu sameeyo xogta kala duwan.
Heerkulka caadiga ah iyo cadaadiska sidoo kale waxaa badanaa loo yaqaanaa xaaladaha caadiga ah. Xaaladaha caadiga ah waxaa sidoo kale ku jiri kara qoyaan isku mid ah.
Qeexitaanno badan ayaa sidoo kale ay adeegsanayaan hay'ado kale oo ku saabsan xaaladaha caadiga ah (eeg shaxda hoose); taas oo mararka qaar fikradda heerkulka qolka (qiyaastii 25 darajo Celsius) loo isticmaalo halkii laga isticmaali lahaa 0 darajo Celsius.
Biraha Alkali waa kooxo ka mid ah xubno ka tirsan kooxda 1 ee miiska xilliyeed ee walxaha kiimikada ah (marka laga reebo hydrogen). Waxyaabahani waa kuwo aad u firfircoon oo marar dhif ah ayaa laga helaa iyagoo qaab nadiif ah dabiiciyan.
Sifooyinka guud ee birahaan alkali waa: qalin cad, jilicsan oo culeyskiisu hooseeyo. Isla markiiba ka falgal halogen aasaasi ah.
Dhulka biraha Alkalka
Birahaas waxaa loo yaqaan dhulka alkaliin sababta oo ah sifooyinka dhexdhexaadka ah ee u dhexeeya alkalis (oksaydhka macdanta alkali) iyo dhul dhif ah (oksaydh biraha dhifka ah).
Birta ku meel gaarka ah
Birta kala-guurka waa 68 walxo kiimiko ah oo leh lambarro atom ah laga bilaabo 21 illaa 30, 39 illaa 48, 57 illaa 80 iyo 89 illaa 112. Sababta magacan loo sameeyay ayaa ah meesha ay ku jiraan miiska xilliyada maxaa yeelay waxay qabataa bilowga xilliga kala-guurka iyadoo lagu darayo isku dar elektaroonigga ee wareegga atomiga ee fasalka d.
Haddii si adag loo qeexay, biraha kala-guurka ayaa ah cunsuryo sameysmaya ugu yaraan hal ion oo leh qeyb orbital buuxsamay (orbital) d, ie, walxaha d-element marka laga reebo scandium iyo zinc.
Qalabka tusmeynta Google
Qolka barnaamijka boos celinta